Famolavolana mailaka vaovao mahavariana (ilaina) | Martech Zone
Famolavolana mailaka vaovao mahavariana (ilaina)
Alarobia, Jona 25, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ity misy mailaka hafa tiako tiako, fa matetika tsy manao na inona na inona! Ity no Downtown Indianapolis, mailaka vaovao mahatalanjona.
Mijanona amin'ny fisoratana anarana aho satria manantena aho fa hisy famolavolana vaovao - ny vaovao ho hampiroborobo ny tanànan'i Indianapolis eo daholo izany, fa ny endriny kosa dia mahatonga ny mailaka tsy ho voavaky sy tsy azo ampiasaina. Izao no antony:
Tsy misy rohy lehibe amin'ny fampahalalana lohan'ny tranonkala tena izy Indy Downtown Inc. Angamba fanaraha-maso izany, saingy heveriko fa tena mila izany.
Ny sary ao amin'ny lohateny kely dia kely ary tsy misy ilana azy - tsy haiko akory ny mamoaka azy. Ny vinavinako dia hoe na iza na iza namorona ny mailaka dia manana vahaolana kely kokoa noho izaho, angamba lehibe kokoa izy ireo. Maka toerana sarobidy 'ambonin'ny vala' izy ireo… ilay toerana izay tena olona afaka jereo rehefa manokatra ny mailaka amin'ny mpanjifany izy ireo.
Ny andalana voalohany amin'ny ankavia, Teny avy amin'ny IDI, lohateny ratsy ary tsy mahomby. Angamba ny olona tsy mahalala akory ny atao hoe IDI?
Ny haben'ny endri-tsoratra dia bitika, tsy voavaky ary tsy misy vaky andalana na bala hamelana ny masoko hanaparitaka ny atiny. Vokatr'izany dia tsy namaky aho! Niantsoantso tokoa ny sary!
Ny hetsika kalandrie angamba no zavatra tsara indrindra amin'ity mailaka ity, saingy tsy misy fiantsoana hetsika amin'ireo hetsika… omeo rohy aho hividianana tapakila sy hahazoana fampahalalana bebe kokoa isaky ny hetsika mba hahafahako mandeha! Tsy hahita hetsika eto aho ary andramo hikaroka ao amin'ny Google. Tsy manam-potoana aho amin'izany!
Novonoina ny atiny ary namboarina ho lasa tsanganana manify tsy ilaina. Eo am-panaraha-maso lehibe kokoa izao ny olona miaraka amina fanapahan-kevitra lehibe kokoa… mandroso amin'ny endrika 800 ka hatramin'ny 1000 pixel. Koa satria sidebar mahitsy ny kalandrie, dia tsy mampaninona ny mpampiasa ny mandroso mitsivalana hahatratra ny sisiny ary hamaky azy avy eo.
ho an'ny vitsivitsy
teny ary izany
Mila farafaharatsiny farafaharatsiny antso ho amin'ny hetsika amin'ny mailaka. Tianao hitsidika ny tsenan'ny tanàna ve aho? Mividy tapakila fampisehoana? Omeo antso iray manokana hanao hetsika aho fa tsy safidy 40. Lazao amiko bebe kokoa ny zavatra iray fa tsy ny hafa rehetra izay hitondra ahy any.
Ampidiro ny pejy fandraisana sy ny sombiny raha manahy momba ny efitrano ianao. Manorata sombintsombiny fohy misy rohy mankany amin'ilay 'tantara feno' izay mitondra ahy any amin'ny pejy misy efitrano fofonaina sy fampahalalana fanampiny.
Aiza ny sarin'olona? Ny tsy fananako sary mitsiky amin'ny olona amin'ity mailaka ity dia mahatonga ahy hahatsapa fa mamaky brochure na lahatsoratra vaovao aho. Ny sarin'ireo olona mankafy ireo hetsika sy toerana ao afovoan-tanànan'i Indy dia hifandray amiko.
Inona no nitranga tamin'ny herinandro lasa? Ahoana ny amin'ny famerenana hetsika na orinasa tsara izay nataonao tamin'ny mailaka tamin'ny fanehoan-kevitra vitsivitsy avy amin'ny mpamaky momba ny fotoana nahafinaritra nananan'izy ireo. Ataovy manokana!
Ny tiako holazaina dia ny famonoana ity mailaka ity. Araka ny efa nolazaiko dia feno fampahalalana marobe… angamba be loatra! Miharihary fa ireo olona nanoratra ny kopia dia nanao ny entimodiny - mila fampisehoana tsara kokoa fotsiny izany mba hahafahan'ny mpamaky mandany sy mihetsika amin'izany.
Tags: isa amin'ny kalitaon'ny adwordsisa amin'ny kalitaon'ny google adwords.htaccessfanatsarana sary famantaranafamaritana findaytsy wwwisa tsaraSocial Media Marketingtranonkala fanatsaranaLife
Fanavaozana amin'ny famaranana I-Prize farany an'ny Cisco
Fitsapana ny fahaiza-mitarika amin'ny telecommuting
Jun 25, 2008 ao amin'ny 7: 32 PM
Raha izaho no mpamorona / mpanoratra ny mailaka dia handà aho. tapaho farafaharatsiny 1/2 ny kopia. Azonao atao ny mampifandray lahatsoratra sasany amin'ny atiny hafa.
Fomba handikana betsaka amin'ny mailaka.